असारमा २९ तिन फिल्म जुध्ने पक्का, कुनलाई फाइदा कुनलाई लाग्ला धक्का ?? ⋆ Filmy Pati
असारमा २९ तिन…
असारमा २९ तिन फिल्म जुध्ने पक्का, कुनलाई फाइदा कुनलाई लाग्ला धक्का ??
असार अन्तिममा बर्ष ७५ को ३ ठुला चलचित्रको भिडन्त हुने पक्का भएको छ । असार २९ गते हलमा तिन फिल्म प्रदर्शनमा आउने भएको छ । असार महिना झरीको महिनामा सिने बजारमा एकै दिन तिन ठुला फिल्म चल्ने हुदा माहोल तातिने अनुमान गरिएको छ । उक्त मितीमा केहि समय अगाडी नै प्रदर्शनमा आउने भनिएको फिल्म ‘बाबु कान्छा’ संगै अन्य दूई फिल्म ‘बिरंगना’ र ‘ड्रिमगर्ल’ प्रदर्शनमा आउने पक्का भएको छ ।
निर्देशक ऋषिराज आचार्यको निर्देशन रहेको फिल्म ‘ड्रीम गर्ल’ आकाश श्रेष्ठ, आष्मा गिरी,हाँस्यव्यङ्ग कलाकार विल्सन बिक्रम राइ, लक्ष्मी गिरी, बरिस्ठ कलाकार सरोज खनाल, रुप सुवेदी, अर्जुन श्रेष्ठ, शिशिर भण्डारी, लगायत कलाकारहरुले मुख्य भुमिका रहेको छ ।
शोभित बस्नेतको कथा, निर्माण निर्देशिनमा बनेको फिल्म ‘बाबु कान्छा’मा नायक सलोन बस्नेत, करिश्मा श्रेष्ठ,ऋतिक शाही ,सरोज खनाल ,निर शाह,सम्राट सापकोटा ,राजाराम पौडेल,लय संग्रौला लगायतको अभिनय रहेको छ । अष्ट महर्जनको एक्शन रहेको फिल्ममा बाबु श्रेष्ठको छायांकन रहेको छ । फिल्मको सन्तोष राज भण्डारी,सुरज घिमिरे सह निर्माता हुन् भने रवि अधिकारी कार्यकारी निर्माता हुन् ।
फिल्म ‘बिरंगना’ मा शिल्पा पोखरेल ,पृथ्बी राज प्रसाई, अनुप बिक्रम थापा, प्रज्वल गिरी,अंशु थापा, आदि कलाकारको मुख्य भूमिका रहेको छ । फिल्मलाई राज बहादुर सानेले निर्देशन गरेका हुन् भने श्याम बहादुर थापा,रघु परियार र देव तामाङले संयुक्त रुपमा निर्माण गरेका हुन् । असारमा यी तिन ठुला फिल्म एकैसाथ प्रदर्शनमा आउने पक्का हुदा कुनलाई फाईदा र कुनलाई धक्का हुने हो ? हेर्न बाँकी रहेको छ ।
सिताले ल्याएको ‘रोज गार्डेन’ भिडियो यस्तो !
नेपाली चलचित्र ‘पर्ब’ युटुबमा आयो है !(पुरा फिल्म सहित)